Ahoana ny fizarana Wi-Fi amin'ny iPhone | avy amin'ny mac aho
Ny fiankinan-doha amin'ny aterineto izay ananantsika ankehitriny dia navadika ho a fitaovana tena ilaina ho an'ny mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao, na handefa hafatra, hijery ny kaontin'ny banky, hiditra amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana, hiasa lavitra...
Miankina amin'ny toerana misy antsika, dia azo inoana kokoa fa ao amin'ny tontolo misy antsika dia manana trano fisakafoanana, toeram-pivarotana ary fivarotana lehibe mihitsy aza izay manolotra fifandraisana Internet maimaim-poana tanteraka. Tsy izany foana anefa. Raha efa hitanao fa ilaina ny mifandray amin'ny Internet, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao Ahoana ny fizarana Wi-Fi amin'ny iPhone.
Eny ary, raha ny marina, dia hasehontsika ny fomba azontsika atao mizara ny angona finday an'ny iPhone-ntsika miaraka amin'ny fitaovana hafa mamorona teboka fidirana an-tariby.
Na ny iPhone, iPad ary iPod touch dia ahafahantsika mamorona tambajotra Wi-Fi hizarana angona finday ary afaka miditra amin'ny Internet amin'ny fitaovana hafa. Tsy miasa toy ny mpamerina famantarana Wi-Fi izy ireo.
Rehefa mazava tsara ny fomba fiasany dia hasehonay anao ny fomba fiasa mizara Internet avy amin'ny iPhone amin'ny fitaovana rehetra.
1 Mizara Internet avy amin'ny iPhone amin'ny Mac
2 Mizara Internet avy amin'ny iPhone amin'ny fitaovana hafa
3 Tsy afaka mizara Internet amin'ny iPhone-ko aho
4 Atsaharo ny fizarana fifandraisana Internet
Mizara Internet avy amin'ny iPhone amin'ny Mac
Ny iray amin'ireo tombony amin'ny fanolorana vokatra avy amin'ny mpanamboatra mitovy dia hita ao amin'ny fampidirana atolotry ny tontolo iainany. Ny fahafahana mamaly na manao antso, mandefa sy mandray hafatra an-tsoratra, mizara votoaty eo amin'ny fitaovana... dia ny sasany amin'ireo fiasa izay ananantsika eo amin'ny iPhone sy Mac.
Saingy, tsy izy irery ihany. raha tiantsika zarao amin'ny Mac ny famantarana Internet an'ny iPhone-ntsika, tsy mila mifandray na oviana na oviana amin'ny iPhone. Ny fizotry ny fifandraisana dia atao ho azy amin'ny fanatanterahana ireo dingana asehoko anao etsy ambany.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia tsindrio ny ny andalana telo miova aseho eo an-tampon'ny bara sakafo.
Manaraka, miandry segondra vitsy isika ary mijery ny fomba fanehoana azy ny anaran'ny iPhoney ao amin'ny fizarana Personal Access Point.
Mba hifandraisana dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ny anaran'ilay fitaovana. Tsy mila miditra ny tenimiafina, satria afindra amin'ny endrika miafina eo anelanelan'ny fitaovana mifandray amin'ny ID iray ihany.
Ity fomba ity dia miasa raha mbola ireo fitaovana roa ireo dia mifandray amin'ny ID mpampiasa iray ihany. Raha te-hifandray amin'ny Internet famantarana ny iPhone izay tsy mifandray amin'ny ID mitovy amin'ny Mac, dia tsy maintsy manao izany amin'ny alalan'ny fomba izay aseho eto ambany.
Mba hanavahana ny fifandraisana amin'ny teboka fidirana mahazatra, fa tsy mampiseho telozoro mivadika, dia hiseho izany peratra rojo roa. Eo an-tampon'ny iPhone-ntsika dia haseho ihany koa ilay kisary mitovy.
Mizara Internet avy amin'ny iPhone amin'ny fitaovana hafa
Raha ny Mac izay tiantsika hizarana ny fifandraisana Internet, dia tsy mifandray amin'ny ID mitovy, mba hizara ny fifandraisana Internet amin'ny iPhone, dia tsy maintsy mamorona teboka fidirana ary mizara ny tenimiafina amin'ny Mac izay tiantsika hifandraisana.
Io fomba io ihany no tokony hampiasaintsika mizara Internet avy amin'ny iPhone amin'ny fitaovana hafa, na Windows na Linux PC, finday Android na fitaovana hafa afaka mifandray amin'ny Internet an-tariby.
Para mizara Internet avy amin'ny iPhone, tsy maintsy manao ireo dingana asehoko anao eto ambany izahay:
Voalohany indrindra, miditra amin'ny firafitry ny fitaovana izahay ary tsindrio eo Toerana fidirana manokana (raha tsy miseho ity safidy ity dia mandehana any amin'ny fizarana manaraka).
Manaraka, ao amin'ilay faritra Teny miafina Wi-Fi Tsy maintsy manoratra ny tenimiafina izay tiantsika hizarana ny fifandraisana isika. Amin'ny alàlan'ny default, Apple dia mampiseho kisendrasendra izay azontsika ampiasaina raha tsy te hanova izany isika.
Farany, tsindrio ny switch izahay Avelao ny hafa hifandray.
Rehefa avy namorona ny teboka fidirana an-tariby izahay dia mandehana any amin'ny fitaovana izay tiantsika hifandraisana amin'ny famantarana Wi-Fi izay noforoninay avy amin'ny iPhone ary mitady ny anaran'ny fitaovana izahay eo amin'ireo famantarana tsy misy tariby naseho.
Tsy afaka mizara Internet amin'ny iPhone-ko aho
Raha avy amin'ny mpandraharaha iray ny iPhone-ntsika ary niova operator isika, rehefa miditra ao amin'ny menio Settings isika dia mety ho ny safidy Mobile Data ihany no aseho, tsy miseho ny menu Personal Hotspot.
Soa ihany fa io olana io manana vahaolana tsotra kokoa mihoatra noho izay azo eritreretina tamin'ny voalohany.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fidirana amin'ny Settings ny iPhone.
Manaraka, tsindrio eo Data momba ny finday ary avy eo miditra Tambajotra data finday.
Farany, tsy maintsy manao izany isika ampidiro ny fampahalalana momba ny fidirana amin'ny mpandraharaha anay, manolo ny angon-drakitra naseho ho an'ny mpandraharaha tany am-boalohany.
Ireo angona ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe APNs. Afaka mahita izany vaovao izany izahay amin'ny fiantsoana ny mpandraharaha anay ary manao fikarohana amin'ny Internet miaraka amin'ny soratra «APN -NAnaran'ny mpandraharaha» tsy misy ny teny nalaina.
Rehefa tafiditra ny angon'ny operateranay izahay dia tena zava-dehibe avereno indray ny iPhone.
Rehefa nanomboka indray ny iPhone, dia hiseho ny menu Personal Hotspot eo akaikin'ny Mobile Data.
Ny sary rehetra ampidiriko ato amin'ity lesona ity dia ahy manokana. Raha manana fanontaniana momba ny dingana ianaoAza misalasala mifandray amiko amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra.
Atsaharo ny fizarana fifandraisana Internet
Raha te hampitsahatra ny fizarana famantarana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny teboka fidirana tsy misy tariby izay noforoninay izahay, dia tsy maintsy mamerina ny diantsika ary alefaso ny switch Avelao ny hafa hifandray.
Raha mizara ny Internet amin'ny iPhone-ntsika amin'ny fitaovana hafa tsy Apple isika, dia tsy ho fantatr'izy ireo raha fitaovana finday na desktop izany, ary afaka misintona izay fanavaozana rafitra, lalao na fampiharana rehetra izy ireo tsy misy fetra.
Raha mizara ny famantarana amin'ny fitaovana Apple isika, dia ho fantany fa fitaovana finday sy dia hametra ny fampiasana angona amin'ny alàlan'ny fandefasana ny Low Data Mode ao anatin'ny safidy tambajotra.
Ity boaty ity dia azontsika atao mampihetsika azy amin'ny tanana raha avy amin'ny iPhone, iPad na Mac izahay dia mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi novokarina tamin'ny fitaovana finday tsy iPhone.
Amin'izany fomba izany, ny rafitra tsy hisintona karazana fanavaozana rafitra, avy amin'ny fampiharana, ary vonoy ny fampitahana ny sary iCloud.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fizarana Wi-Fi amin'ny iPhone